Tilmaamaha iyo Halbeegyada Raadinta Google | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 5, 2021 Talaado, Oktoobar 5, 2021 Douglas Karr
Maanta, waxaan ka raadinayey xog -ururinta websaydhka Adobe natiijaduna ma ahayn wixii aan raadinayay. Halkii aan aadi lahaa goob kadibna aan gudaha ka baari lahaa, had iyo jeer waxaan had iyo jeer u adeegsadaa gaagaabyada Google goobaha raadinta. Tani waxay ku timaadaa si aad u anfacaya - haddii aan raadinayo xigasho, gogo 'code, ama nooc gaar ah.
Xaaladdan, raadinta asalka ahayd waxay ahayd:
Natiijadaasi waxay siisaa bog kasta dhammaan qaybaha hoose ee Adobe oo ay ku jiraan eraygu infographic. Taasi waxay kumanaan bog ka keentay goobta sawirrada saamiyada ee Adobe sidaa darteed waxaan u baahday inaan ka saaro subdomain -ka natiijooyinka:
Waxaan ka jaray subdomain -ka gaarka ah anigoo adeegsanaya laga jaray la saxiix subdomain -ka aan ka saaray. Hadda waxaan u baahday inaan raadsado nooc gaar ah… faylka png:
Kuwani dhammaantood waa kuwo gaagaaban oo aad u faa'iido badan oo lagu baadho goobo gaar ah… laakiin waxaad la yaabi lahayd sida kale ee aad u beegsan karto weydiimahaaga.
Sida Loogu Raadsado Goob Gaar Ah Google
goobta: Raadinta gudaha goob ama domain gaar ah. -goob: waxay ka reebaysaa domain ama subdomain
Sida Loogu Raadsado Google Madal Baraha Bulshada
Adeegso astaanta @ si aad u raadiso madal warbaahinta bulshada (kaliya hubso inaad dhigto madal bulsheedka dhamaadka).
Sida Loogu Raadsado Nooca Faylka Gaarka ah Google
nooca: Raadinta nooc gaar ah oo fayl ah, sida pdf, doc, txt, mp3, png, gif. Waxaad ku reebi kartaa -filetype.
Sida Loogu Raado Cinwaan Google
is haysta: Wuxuu raadiyaa eray gaar ah oo ku jira cinwaanka bogga intii uu ka raadin lahaa bogga oo dhan. Waxaad ku reebi kartaa cinwaan -cinwaan.
cinwaanka hoose: Raadinta eray gaar ah oo ku jira cinwaanka boostada baloogga. Waxaad ku reebi kartaa -inposttitle.
allintitle: Ka raadi weedh dhan cinwaan. Waxaad ku reebi kartaa -allintitle.
Sida Loogu Raadiyo URL Dhexdooda Google
allinurl: Ka raadi weedh dhan erayada URL. Waxaad ka saari kartaa adigoo leh -allinurl.
soo galay: Ka raadi ereyada URL dhexdooda. Waxaad ku reebi kartaa adigoo isticmaalaya -inurl.
Sida Loogu Raadsado Qoraalka Anchor WIth Google
allinanchor: Ka raadi weedh dhan gudaha qoraalka barroosinka ee sawirka. Waxaad ku reebi kartaa -allinanchor.
inanchor: Ka raadi eray ku jira qoraalka barroosinka ee sawirka. Waxaad ku reebi kartaa -inanchor.
Hawlwadeennada Qoraalka Ka Raadinta Google
U adeegso * inta u dhexeysa ereyada sidii calaamad duurjoog ah si aad u raadiso dhammaan isku -darka.
Adeegso OR -ka hawl -wadeenka inta u dhexeysa ereyada si aad u raadsato labada eray.
Adeegso AND operator -ka inta u dhexeysa ereyada si aad u raadiso shuruudaha oo dhan.
U adeegso * sidii calaamad duurjoog ah si aad u hesho ereyo leh jilayaal ama ereyo u dhexeeya
Adeegso ~ ka hor ereygaaga si aad u hesho ereyo la mid ah. Xaaladdan oo kale, ereyada sida jaamacadda ayaa iyaguna soo bixi doona:
Ka saar erayada leh calaamadda laga jaray
Soo hel eray ama weedh sax ah adoo ku dhejinaya xigashooyinka
Ku hel dhammaan ereyada hal natiijo gudaheed. Waxaad ku reebi kartaa -allintext.
Ku hel dhammaan ereyada hal natiijo gudaheed. Waxaad ku reebi kartaa -intext.
Soo hel erayo isku dhow oo dhex ah tiro kalmadood oo cayiman
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa isku -darka badan raadinta si aad ugu darto ugana reebto shuruudaha, weedhaha, aagagga, iwm
Jawaabaha Degdegga ah iyada oo loo marayo Raadinta Google
Google wuxuu kaloo bixiyaa shaqooyin kale oo runtii waxtar leh:
safafka ee tirooyinka, taariikhaha, xogta, ama qiimaha la isticmaalayo ..
Weather: Search cimilada si aad u aragto cimilada meesha aad joogto ama aad ku darto magac magaalo.
Qaamuus: Ku rid qeexo erey kasta hortiisa si aad u aragto qeexitaankiisa.
Xisaabinta: Geli isla'egta xisaabta sida 3 *9123, ama xallinta isla'egyada garaafyada ee adag oo ay ku jiraan +, -, *, /, iyo ereyada trigonometry sida cos, dembi, tan, arcsin. Hal shay oo waxtar leh oo leh xisaabinta Google ayaa ah inaad adeegsan karto tirooyin aad u badan… sida 3 tiriliyan / 180 milyan oo aad hesho jawaab sax ah. Way ka sahlan tahay inaad geliso dhammaan eber -yada xisaabiyahaaga!
boqolkiiba: Waxa kale oo aad xisaabin kartaa boqolkiiba adiga oo galaya %:
Beddelaadda cutubka: Geli beddelid kasta.
Cayaaraha: Raadi magaca kooxdaada si aad u aragto jadwal, dhibcaha ciyaarta iyo in ka badan
Xaaladda Duulimaadka: Geli lambarkaaga duulimaadka oo buuxa oo hel xaaladdii ugu dambeysay
Filimaan: Soo ogow waxa ka socda deegaankaaga
Xaqiiqooyinka degdegga ah: Raadi magaca qof caan ah, goob, filim, ama hees si aad u hesho macluumaad la xiriira
Tags: googlegoogle xisaabi boqolleydaxisaabinta googleqaamuuska googleraadinta google googlegoogle ka saarxaaladda duulimaadka googlefilimada googlegoogle xaqiiqooyin deg deg ahgoogle safafkaraadinta googlegoogle search domaintoobiyeyaasha raadinta googleraadinta bogga googlegoogle raadinta isboortigagoogle trigonometrybeddelidda unugga googleraadinta calaamadda googledhexda
Naqshadu Waa Danjiraha Aamusan ee Sumaddaada
5 Tixgelin Marka La Helaynayo App -kaaga Mobile -ka ee Suuqa Jaban
post weyn - ku qorista rss hadda 🙂